कोरोना संक्रमण : सबै सचेत बनौं – BhanuKhabar | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. कोरोना संक्रमण : सबै सचेत बनौं – BhanuKhabar | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
कोरोना संक्रमण : सबै सचेत बनौं
२४ बैशाख २०७८, शुक्रबार May 7, 2021
-गणेश बन्जाडे/भानु खबर
केहिदिनयता कोरोना बाट संक्रमित र आईसोलेशनमा रहने बिरामीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। केही दिन यता संक्रमितको संख्या दोब्बरले बढिसकेको छ।
परिक्षण गर्नेहरु मध्ये धेरैमा संक्रमण पाईएको छ। त्यसैले समयमै सचेत भएनौ भने अन्योलता न आउला भन्न सकिदैन ।
सबैलाई सतर्कता बनाउन संकेत गरिरहेको अवस्था छ। दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या उच्च हुँदा ज्यान जाने समेत खतरा बढन सक्ने संभावना बढिरहेको छ। त्यसैले समयमै जिम्मेवारी बन्नुपर्छ । यो कठिन समयमा सबभन्दा पहिले स्वास्थ्य सम्बन्धि मापदण्ड पालन गरि संक्रमण बाट जोगिनु पहिलो उत्तम उपाय हो। यदि सबैजनाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नेहो भने पनि कम जोखिम हुनसक्छ ।
दिनहुँ माक्स, सेनिटाईजर प्रयोग गर्ने, भौतिक दुरि कायम गर्ने, भिडभाड नगर्ने अनि नगराउने स्वास्थ्य संबन्धी उच्च सतर्कता अपनाउने हो भने संक्रमण हुने कम संभावना हुन्छ। यस्ता किसिमका क्रियाकलाप सर्बसाधारणले मात्रै गरेर पुग्दैन। विभिन्न उच्च तह तप्काका सरकारी , गैरसरकारी संघ सस्था हरुले ध्यानदिनु जरुरी छ।
अहिले विभिन्न पार्टी ,संघ र संगठनहरुले भेला, बैठक अनि कार्यक्रम गरिरहेका छन यस्ता किसिमका गतिविधिहरुले सजिलै संक्रमण बढने संभावना रहन्छ। संक्रमणको न्यूनीकरण गर्नको निम्ति परिक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको दायरा प्रभाबकारी बनाउनुपर्छ भारत लगायत विभिन्न देश बाट आउने मानिसहरुले नसारुन भन्ने कुराहरूमा सचेत हुनुपर्छ । यसका निम्ति त्यताबाट आउने सबैलाई स्वास्थ्य सम्बन्धि मापदण्ड अनुशारको क्वारेन्टाइन र नाकाबाट सम्वधित ठाउँमा पुराउने ब्यबस्था गर्नुपर्छ ।
सरकारले पनि छिमेकी नाकाहरुमा स्वास्थ्य सम्बन्धि सचेतना सहित पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मी खटाई नेपाल प्रबेश गर्नेहरुलाई स्वास्थ्य परिक्षण लगायतका ब्यबस्थापनलाई अलि फराकिलो गराउनुपर्छ। छिमेकी देशहरूको सिमानामा दुबै देश बिच समन्वय भुमिका हुनु जरुरी छ। सबै भन्दा समस्या भनेको सिमाना बाट बिना परिक्षण भित्र र बाहिर गर्ने नागरिक अलि ध्यान दिनुपर्छ। सिमानामा बिशेष सुरक्षाको ब्यबस्था मिलाउनुपर्छ ।
सरकारले कठिन अबस्थामा पुर्बधार ब्यबस्थापन अभावमा उपचार नपाई बिरामीको ज्यान जाने बाताबरण नबनोस। स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका सम्बन्धि निकायहरूलाई जिम्मेवारी तयारी अबस्थामा रहन र हुन पनि जरुरी भएकाले ब्यबस्थापनमा संबन्धित कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ।
अस्पतालहरुका सघन उपचार नै नपाउने किसिमको अवस्थामा जान दिनुहुदैन। सबैले संक्रमण हुन नदिन स्वास्थ्य सम्बन्धिका मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ। सरकार पक्ष या नागरिक बाट होस लापरबाही गर्नुहुदैन।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको २४ बैशाख २०७८, शुक्रबार May 7, 2021 157 Viewed